के नाग देवता हुन् ? - Suvham News
Narayan Gaunle ————
देवता दानवको विपरीतार्थक शब्द हो । जुनकुनै तत्त्वबाट हाम्रो जीवन या पृथ्वीमा सकारात्मक असर परेको छ त्यो देवता हो । यात्रा गर्दा छहारी दिने रुख (पीपल..) देवता हो, औषधी र अक्सिजन दिने झार (तुलसी) देवता हो, खेतमा पानी र वातावरणलाई प्राण दिने नदी देवता हो, वायु देवता हो, प्रकाश दिने सूर्य देवता हो, चन्द्रमा देवता हो..खेतीका लागि मल र जीवनको पुष्टताका लागि दूध दिने गाई देवता हो । सिङ्गो प्रकृति देवता हो । देवताको पूजा (सम्मान र संरक्षण) मनुष्यको कर्तव्य हो । पीपलको पूजा फेदमा जल चढाउनु हो, गाईको पूजा पौष्टिक आहार खुवाउनु र संरक्षण गर्नु हो । नदीको पूजा ढल र फोहर नमिसाउनु हो । साबुनबिनै नुहाएर कपडासमेत नदीमा नधुनु र बाहिरै निचोर्नु नदीको धार्मिक सम्मान हो । पृथ्वी स्वयंलाई देवता मानेर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने आग्रह सनातन धर्ममा छ । यो अन्धविश्वास या कुरीति होइन, यो परस्पर सबैलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै जिउने कला हो । यो बाँचौं र बचाऔं भन्ने संस्कृति हो । गीतामा भनिएको छ :
अर्थात् देवताहरूलाई संरक्षण गरियो भने तिनले हामीलाई संरक्षण गर्नेछन् र परस्पर मिलेर जीवनको श्रेय र आनन्द हासिल गर्नसकिन्छ ।
यो प्रकृतिप्रतिको, इकोसिस्टमप्रतिको उच्चतम सम्मान हो । ईश्वरको सर्वव्यापकतालाई स्वीकार गरेर जीवन र जगतका यावत् तत्त्वलाई देवता मान्नु सनातन संस्कृतिको सुन्दरतम पक्ष हो । यो धर्ममा मानवमात्र होइन सबै चराचर जगत् ईश्वरीय तत्त्व हो, देवता हो । जीवनमा कसैप्रति पनि वैरभाव नराखी स्नेह या कम्तीमा समभाव राखेर जिउने कला यो संस्कृतिले विकास गरेको थियो । अहिंसा यसको मूल मर्म रहेको देखिन्छ । काग, मुसा, गिद्ध, बाघ, भालु, कुकुर सबैलाई धर्मसँगै गाँसेर पूजा गर्ने परम्परा अन्य संस्कृतिमा कहाँ होला ?
नागका प्रकारहरू, विषको मात्रा, इकोसिस्टममा तिनको महत्वजस्ता विषयमा उक्तदिन चर्चा हुन्थ्यो । यो संस्कृतिको एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकास हुँदै गयो ।
हामी आज पनि मानवअधिकार दिवस मनाउँछौं, बाघदिवस, नारीदिवस, पृथ्वीदिवस, शिक्षा दिवस मनाउँछौ । ती सबैको उद्देश्य तत्तत् विषयमा चेतना फैलाउनु नै रहेको छ । पश्चिमले तोकेर दिएको दिवस मनाउँदा वैज्ञानिक भइने तर आफ्नै मौलिक संस्कृतिका दिवसहरू मनाउँदा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरौं । जुलाइ १६ लाई विश्वले सर्प-दिवसको रूपमा मनाउँदा सर्पका तस्बीरहरूले मोबाइल र टिभीका स्क्रिनहरू भर्नु हुने अनि हामीले हजारौं वर्षदेखि मनाउने नागदिवसमा नागलाई देवता मानेर ढोकामा तस्बीर टाँस्न किन नहुने ? बरु सरकारले यो दिनलाई सर्पबारे सर्वाङ्गीण शिक्षा दिने दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गर्ने कि ? (रि-पोस्ट)
सबैमा नागपञ्चमी एवं संयोगवश आज मनाइँदै गरेको रक्षाबन्धनको शुभकामना !
Prevअर्काको बैंक खातामा १ रुपैयाँ जम्मा गर्न पनि आफ्नो परिचयपत्र खुलाउनु पर्ने
Nextगजल- दिल कुमार श्रेष्ठ